FAQs - Qingdao Hitech Chuangying Isixhobo Co., Ltd.
Uyikhetha njani into yokutshintsha kufutshane?
Kuqala kufuneka ufumane iimpawu zotshintsho olusondeleyo: utshintsho kufutshane kwinto yokuba sisinyithi, kwaye zihlala zinomgama othile wokuziva kunye nobunzima bokubona. Ezi zinto zinokuchaphazela ukusebenza kotshintsho kufutshane.
1.Ukuqonda umgama: phakathi kwe-2mm-15mm, kokukhona umgama wokuziva, ubungakanani bukhulu beswitshi kufutshane. Ke ngoko, kubaluleke ngakumbi ukukhetha umgama wokuziva weemeko ezithile apho kufuneka kufakelwe khona izinto zokufaka.
2, induction frequency: Uhlobo ngalunye lokutshintsha kufutshane kunamaxesha okunyanzelwa, anje nge: 500HZ, ngaphezulu kokuphindaphindeka okunyanzelekileyo kufuneka usebenzise olunye uhlobo lokutshintsha kufutshane.
Ke xa ukhetha ukutshintshela kufutshane, kuya kufuneka uthathele ingqalelo umba wokuziva kunye nobungakanani bokubona ngokweemfuno zokwenyani, emva koko umisele ukuba loluphi uhlobo lwendlela oza kuyikhetha. tshintsha.
Ukungaqondani kakuhle komgama wefowuni yokujonga umgama?
Utshintsho ngalunye lwefotoelectric switch luya kuba nomgama wokuziva. Lo mgama wokuqonda uhlala usekwe kumhlophe omhlophe njengombala wesalathiso wento yokuziva, umhlophe ngenxa yayo Ukufunxa akulunganga kwaye ukubonakalisa okuhle kulungile, ke umgama wokujonga mde kakhulu kuneminye imibala. Ukuba umgama woluvo lwefotoelectric switch yi-30CM, utshintsho lwefotoelectric lunokuqonda umgama we-15cm kuphela xa uhambisa into emnyama, ngakumbi into emnyama. Ngenxa yokuba ukufakwa kokukhanya okumnyama kulungile kakhulu, ukubonakalisa kuya kuba kubi kakhulu. Xa imitha ye-infrared ikhanyiselwe kumphezulu wento emnyama, umthombo wokukhanya uyafunxwa, ke umgama wokujonga into emnyama yeyona imfutshane, kwaye ukunganyamezeleki akunakwenzeka.
Umgama wokuziva weswitshi we-photoelectric ikwanolwalamano oluthile kunye nokukhanya kwangaphandle kokukhanya.
Ikhawuntara yoomatshini ingxola kakhulu?
Zininzi iingxaki ezibangelwa kukufakwa ngokungafanelekanga kwekhawuntari, okwenza ukuba icandelo lokuhambisa lingahambi kakuhle, okanye ikhawuntari inde kakhulu, kwaye amalungu angaphakathi anxibe kwaye kufuneka abuyiselwe kumzi-mveliso ukuze alungiswe.
Akukho siphumo soMqondiso?
Abafowunelwa bemveliso batshisiwe okanye useto lwemveliso aluchanekanga.
Imilinganiselo yobude ayichanekanga?
Owona mgama ulinganiswe ngokokulinganisa ubude awuchanekanga. Kungabangelwa sisilayidi esihambelanayo senxalenye yokuhambisa kunye nesixhobo sokulinganisa, okanye ulungelelwaniso lomlingani wokulingana aluchanekanga.
Kungenzeka ukuba amaza okanye ukuphakama kwesiginali sokubala akuhambelani nemfuneko yokubala yeparameter okanye inani lokubala elingasetyenziswanga ngokungachanekanga.
Ikhawuntara ye-elektroniki exhasa ukutshintsha kwesicima sokhuseleko?
1. Inzwa ye-infrared luhlobo lokusasaza, kunye nomzimba ovavanyiweyo osetyenzisiweyo liphepha elimhlophe elimhlophe.
2, infrared photoelectric switch inokusebenza ngokuzinzileyo phantsi kwemeko yokukhanya okuphezulu, kodwa kumgaqo, thintela i-axis optical axis ejongene nelanga, njl.
3. Ubuncinane bobubanzi obubonakalayo beswitshi yeelemitha yefowuni bubushushu ngama-80% obubanzi beelensi zokutshintsha kwesixhobo sombane.
4. Xa usebenzisa imithwalo enganyangekiyo (enjengezibane, iinjini, njl. Tshintshela, kule meko, nceda ucofe umthwalo kwi-relay ye-AC.
5. Iilensi zesitshisi se-infrared photoelectric sinokucinywa ngephepha lelensi ukukhubaza iikhemikhali ezinje nge-solution solvent ukuthintela umonakalo ongapheliyo kwisipili seplastiki.
6. Ngeemfuno zokwenene zesiza somsebenzisi, phantsi kweemeko ezithile ezinzima, ezinje ngezihlandlo ezinothuli, iswitshi yombane evelisiweyo inovakalelo. Ukhetho lonyuswe nge-50% ukulungiselela ukusetyenziswa kwexesha elide kweemfuno zomjikelo wesondlo wokutshintsha umbane.
7. Ukwenzela ukuthintela iingozi, nceda ujonge ukuba iingcingo zombane zichanekile na phambi kokuba kuvulwe umbane, kwaye ujonge ukuba ingaba umbane ulinganisiwe na.
Zeziphi izivamvo ezinokusetyenziswa kunye nemitha?
Iimitha zokubonisa zedijithali zihlala zifumana imiqondiso yokubetha. Iimvakalelo eziphambili ezinokusetyenziswa kunye nazo zilandelayo:
1, ukusondela switch: ukhetho ukuba ukuchaneka akukho phezulu
2, ivili lemitha: ukuchaneka kuphezulu kunokutshintsha ukusondela, ubukhulu becala kusetyenziswa iingcingo, iintambo, ilaphu, njl.
3. I-Rotary encoder: ngokuchaneka okuphezulu, inokongezwa ikhutshwe, ikakhulu isetyenziselwa ukulinganisa iimveliso zexabiso eliphezulu
Ezinye izixhobo ezinje ngokutshintsha kombane, ukutshintsha kweHolo, njl. Zinokusetyenziswa ngemitha, kwaye kufuneka uzimisele ngokwakho ngaphambi kokukhetha isivamvo esilinganayo. Ezona mfuno, musa ukulandela ngokungaboni ngocoselelo oluphezulu.